Ny Fampianarana No ‘Làlana Ho An’ny Fanovàna’ An’i Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Septambra 2014 13:10 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, Deutsch, Español, Aymara, Ελληνικά, English
Ankizivavy milalao mandritry ny iray amin'ireo tetikasa Kesh Malek tany Aleppo, Syria. Loharano-tsary: Tranonkalan'ny Kesh Malek
Efa nalefa tamin'ny SyriaUntold ity lahatsoratra ity teo aloha.
Satria ny endrika ara-tafika, ny fandinihana ny fipetrak”ireo tany manodidina eo amin'ny fomba fiady, ary ny fisehon'ny fizarazarana ara-poko eo amin'ny fifandiran'ny Siriana no mibahan-toerana amin'ny fifantohan-tsain'ny media , maro ireo fandraisana andraikitra ao an-toerana no manohy manohitra ny fahapotehana tanteraka sy ny tsimatimanota mihanaka manerana ny firenena. Iray amin'ireo fandraisana andraikitra vao haingana ireo ny Chance4Change (Vintana ho an'ny fanovàna), manisy tsindrimpeo amin'ny ho avy tsaratsara kokoa ho an'i Syria, amin'ny fiantohana fampianarana ho an'ireo taranaka tanora indrindra.
Nataon'ireo fikambanana tanora ao amin'ny fiarahamonim-pirenena Kesh Malek (Checkmate), mikendry ny hamatsy vola ireo fianarana miisa 15 ao amin'ireo faritra tsy fehezin'ny fitondrana ny Chance4Change, mba hiantohana ny dingam-pivoarany ary hitazonana azy ireo hahaleo tena lalandava.
“Maro ireo fikambanana efa nanandrana nisahana ny ho avin'ny firenena tamin'ny fanipazana vola ho an'ny talen'ny sekoly, ary nandray an-tanana ny dingam-pivoarana sy ny fitantanana ny sekoly,” hoy ny nazavain'i Marcel Shehwaro, mpanoratra, tamin'ny SyriaUntold . “Izany no maha zava-dehibe ny fanohanana ny ezaky ny fiarahamonim-pirenena hanome ho avy ho an'ny firenena amin'ny alalan'ny fomba fitantanana mahaleotena ary mahomby eo amin'ny fampianarana.”
Araka ny tenin'ny olona iray hafa amin'ireo nanangana ilay hetsika, ao amin'ny faritra iasàn'izy ireo “tsy ahiana intsony ny hiantefan'ireo sekoly ho eo an-tanan'ireo olona tsy mety miova amin'ny fotokeviny. Efa niasa, nijery vahaolana momba io karazana olana io izahay, ary ny hanakana ireo mpamatsy vola no antony iray anaovanay io hetsika io, na iza izy ireo na iza, izay miezaka maka ny sekoly any Syria ary manandrana manatsofoka an-tery ny fotokeviny any amin'ny ankizy .”
Raha ny resaka dingam-pivoaran'ny fampianarana any an-tsekoly indray, manaraka ny fandaharana ofisialy Syriana ny tetikasa, hoy izy, “amin'ny fanilihana miavaka ireo taranja manokana mifanaraka amin'ny fitondrana, toy ny boky fampielezankevitra Baath antsoina hoe ‘National'”.
Ankoatra ny fianarana an-dakilasy, manome fikarakaràna ny fahasalaman'ireo ankizy koa ny tetikasa, amin'ny fampidirana azy ireo any amin'ny toeram-pitsaboana. Manazava ao amin'ny tranonkalan'ny hetsika ireo mpikatroka mafana fo ao amin'ny Kesh Malek hoe :“Hojerena ary ho karakaraina ihany koa ny fikorontanana ara-tsaina sy ny tebiteby vokatry ny fisian'ny ady”. “Ho famaranana izany, mino izahay fa tena zava-dehibe tokoa ny fanomezana fahaiza-manao ho an'ireo mpianatra, izay afaka manampy azy ireo eo amin'ny fiainany manontolo.”
Ireo ankizy mandritra ny tetikasa Kesh Malek ao Aleppo, Syria. Nangalana ny sary: tranokalan'ny Kesh Malek.
Tsy io no fandraisana andraikitra voalohany nataon'ny fikambanana ao Aleppo, izay nametraka tsindrimpeo amin'ny resaka fampianarana sy tsy fampiasana herisetra, hatrany ny fanombohan'ny fitroarana. Nanao ary nandray anjara taminà hetsika sahàla amin'ny Eulogy For Fear (Fiderana Ho an'ny Tahotra), sy My Country (Ny Fireneko), I Dream (Manonofy aho)…ny Kesh Malek, niaraka tamin'ireo andiany mpanadio, fianarana vaovao mitondra ny anaran'ny maritiora Musfa Qurman, ary fety lehibe iray ho an'ireo ankizy ao amin'ny tanànan'i Bustan al-Qasr mpifanolo-bodirindrina aminy.
Ny fandraisany andraikitra farany izao, miantso ireo fikambanana liana amin'ny ho avin'i Syria ny Chance4Change, tafiditra ao anatin'izany ireo Syriana ao an-toerana sy ny any ivelany, ary ireo rehetra mifantoka amin'ny fanamafisana ny fiarahamonim-pirenena, mba hanampy fampianarana tsy mitanila ho an'ireo ankizy Syriana, tsy asiana dindon'ny fotokevitr'ireo mpamatsy vola sy ny fandaharanasany. Ho azy ireny, mandefa izao hafatra manaraka izao izy ireo:
Tsaroanao ve ny fotoanan'ny fisakafoanana fahiny? Fony ianao sy ny namanao nanana fahazarana ny tonga mialoha tsara mba hamandrika ny toerana eo anilanao ho an'ireo namanao akaiky sy ireo olon-tianao? Tsaroanao ve ilay ramatoa ao amin'ny fisakafoanana manana endrika tezitra lava eo ampandrosoana ny sakafo maminao?
Ilay milina fivarotana sy mpanangona vola mandeha ho azy, lasa tezitra aminao rehefa mihitsoka ny zava-pisotronao ka miezaka ny manozongozona ilay milina ianao mba hampidina azy. Tsaroanao ve ilay toerana fisoloana akanjo fananihaniana alohan'ny hanaovana fanatanjahantena, ny bitsibitsika sy ny resaka nandeha momba ilay mpanazatra vaovao tsara bika nahatoratorana (sexy) tamin'ny fanatanjahantena ? Tsaroanao ve ny lalao baolina kitra famerenana voalohany natao tao an-tanàna? Ny fanazarantena sy ny fanamby teo alohanao, indrindra rehefa tonga nijery ny lalao ilay tovovavy tianao ary nitehaka nandrisika ho anao?
Anisan'ireo zavatra maro tsy mba iainan'ireo Syriana taranaka vaovao taty aoriana ireny fahatsiarovana ireny. Satria tsy maintsy mandeha any amin'ny efitra kely any ambanin'ny tany izy ireo mba hianatra, matahotra ireo fanafihana an'habakabaka. Satria zavatra lafo vidy tsy takatr'ireo fiarahamonim-pirenena tsotra ny milalao eny an-tokotany. Saingy mbola misy vintana hahafana miova:
Ilay fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana manokatra sekoly na dia kely aza ny eo am-pelatanany izao no vintana.
Ireo lehilahy sy vehivavy nivondrona nanamboatra sekoly any amin'ny tanàna mpitanolo-bodirindrina izao no vintana.
Ary mety ianao no vintana … amin'ny fanomezana 10 dolara kely, afaka mandoa karamanà mpampianatra ao amin'ny kilasy iray ianao, herinaratra mandritra ny roa andro, ny kilasy mandritra ny herinandro, na mividy ireo kahie ho an'ny mpianatra iray mandritra ny taona.
Mety ho vintana ho an'ny fanovàna ny ho avin'ireo mpianatra ireo ny fanomezanao.
Jereo ny tranonkalan'ny hetsika ary ny hetsika ao amin'ny Facebook ho an'ny fanomezana sy andinindininy bebe kokoa.